Ukubuyekeza: "Umbungu eqhweni", ngu-F. Javier Plaza | Izincwadi Zamanje
Ukubuyekeza: «I-magpie eqhweni», ngu-F. Javier Plaza
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngikutshele ngakho Magpie eqhweni, inoveli yokuqala ngo F. Javier Plaza, enyatheliswa ngu IHayidesi Lokuhlela. Sekuphele amasonto ambalwa ngiqedile ukuyifunda. Futhi uma bengingazikhuthazi ukuthi ngenze ukubuyekeza ngaphambilini, kungenxa yokuthi angikalulami ngokuphelele embonweni wokuthi le ndaba ishiye kimi.
Magpie eqhweni Kwenzeka ngaphezu kwezinsuku eziyi-7, eParis enobuciko kunabo bonke ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX. Ngalezo zinsuku sazi uCamille, umlingiswa wakhe oyinhloko, insizwa evela emndenini omuhle ofuna ukuba ngumdwebi ngaphezu kwakho konke okunye, kepha izibopho zomndeni wakhe azikwenzi kube lula kuye. Sithola ukuthi ungubani, wonke umlando wakhe nowalabo abamzungezile, amaphupho akhe, izifiso zakhe, izifiso zakhe. Kepha futhi nokukhungatheka kwakhe, izibopho zakhe, ukungabaza kwakhe, ukwesaba kwakhe. UPlaza ungena emqondweni kaCamille njengomdwebi, njengendoda, njengendodana, njengomthandi, njengomdwebi, njengebhungu elifuna ukulwa nesiphetho salo ukuze lizenzele esalo, kepha liyaphumelela kancane.
Ngingakusho lokho Magpie eqhweni kuyinoveli elandiswa njengesikhumbuzo. Kumuntu wokuqala, uCamille ulandisa ngezinsuku zakhe zokugcina eParis, ngaphambi kokubuyela ekhaya, lapho kuzofanele afeze izibopho zakhe njengendodana endala, kufaka phakathi ukushada nengoduso yakhe.
Kodwa-ke, lokho ekuqaleni okubonakala kuyidayari, kancane kancane ukuthola leyo ndlela yezinkumbulo, lapho iqala ukubona ukuthi ibhaliwe kusuka esikhathini esizayo. Futhi njengoba umfundi ekuqaphela lokhu, umfundi angabona ukuthi wonke amaphupho kaCamille angahlala kuphela kulokho, emaphusheni, phakathi kwabo, ebuyela eParis futhi entwasahlobo ukuyokhombisa nama-Impressionists kumfanekiso obalulekile wokuqokwa.
Kimi lokho kungabaza, lowo muzwa, waphenduka waba usizi olumsulwa. Kangangokuthi ngenze into ebengingakaze ngiyenze empilweni yami. Ngiyekile ukufunda le ncwadi isahluko esivela ekugcineni izinsuku ezimbalwa ngoba bengingakwazi ukubekezelela ubuhlungu bokuthola ukuthi ukuphela ebengikulindele emakhasini amaningi kangaka edlule kungenzeka.
I-Plaza ikwazi ukudala umlingisi okulula kakhulu ukuzwelana naye. Yize engumuntu othanda abesifazane futhi ezenzisa - ngendlela aveza ngayo amadoda angaleso sikhathi, akukho okungajwayelekile, ngakolunye uhlangothi - uCamille unephupho futhi uyalilwela. Ungumkhiqizo wesikhathi sakhe ofuna ukuphuma kusikhunta, kepha izinkolelo zakhe ziyafana futhi kufanele alwe naye. Isibopho sabanye futhi ngenxa yakho kubangela kuye impi yomqondo okuvela kuyo imibono ethokozisayo nokubonakaliswa.
UJavier Plaza ungumthandi womdwebo. Impressionism ukunyakaza kwakhe kwezithombe okuthandayo. Futhi uyayibona. Uthando oluvela emakhasini we Magpie eqhweni lapho ngichaza umdwebo noma isigcawu omunye wabalingiswa ocabanga ngokudweba, ngaze ngabuza umbhali wencwadi ukuthi ngabe leyo midwebo ikhona ngempela yini.
Kepha hhayi. Ngaphandle kwesithombe Magpie eqhweni weMonet, zimbalwa izithombe zangempela ezishiwo kule noveli. UJavier ungitshele ukuthi ukhuluma ngale midwebo ecatshangelwayo ecabanga ngalokho “umdwebi angakuthakazelisa ngomsebenzi wakhe”, nokuthi wazama ukungena ekhanda lakhe njengoba kwenzeka kuye uma kwenzeka okuthile kuye noma ebona okuthile bese ecabanga “lokho anganikela ngombhalo obhaliwe ».
Ngithande imininingwane angitshele yona ngomlingiswa kaCamille okuthi, yize engakhuthazwa ngumlingiswa wangempela, uPlaza wamnika lelo gama ehlonipha uCamille Pisarro, omunye wabadwebi abathandayo. Eqinisweni, indwangu eyintandokazi kaPlaza yiPissarro ngqo, iBoulevard de Montmartre ekushoneni kwelanga. Futhi kunjalo eMontmartre lapho kwenzeka khona indaba esemqoka.
Elinye ilukuluku eliqaphelekayo ugqozi lwabanye abalingiswa abasencwadini, uYves noVictor, abadwebi ababalulekile uCamille aba ngumngani wabo nabamthwebula. UPlaza owathi uYves uphefumulelwe nguToulousse Lautrec, yize impilo yomdwebi, ikakhulukazi eminyakeni yakhe yakamuva, yayonakele impela futhi ishubile, futhi wasusa noma imuphi umkhondo wenhlekelele kumlingiswa kaJves ukuyenza ijabule. UVictor unezici zePisarro.
Lezi zinhlamvu ezimbili zihamba noCamille ukuyomela abantu ababili abaphikisanayo bomculi. U-Yves akekho, umculi we-bohemian wesikhathi sakhe ophila ngokudweba nobusuku kuphela. Futhi uVíctor ungumculi othule, othanda umndeni onenkinga yezenhlalo.
Umzimba uyadlula nenkazimulo ihlala
Le nkulumo ishiwo nguYves kuCamille. Ukungabaza ukuthi uCamille uzolifeza noma cha iphupho lakhe sekuvele kubonakala kakhulu lapho uYves ekhuluma la mazwi. Yize le nkulumo ikhishwa ngumdwebi njengoyena ongayifuni leyo nto, phakathi kwamahlaya nokuhlekwa usulu, iqiniso ukuthi umqondo ujule impela.
Lapho ngithola le nkulumo kulapho ngathola khona ngempela inhlekelele eyayiza: umehluko phakathi kokuphila nokufa, noma ukuhlala nokuhlala enkumbulweni ingunaphakade. Le ncwadi ngizoyikhumbula ngezinto eziningi, kepha ngiyazi ukuthi lo mqondo uzohlala unami njalo.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele ufunde Magpie eqhweni, kepha uma bekufanele ngikhethe eyodwa kuphela, impela bekungaba wukuphila le nkulumo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ukubuyekeza: «I-magpie eqhweni», ngu-F. Javier Plaza
Amanoveli abukeka ngokufana asolisayo: 'IShutter Island' kanye 'Nemigqa KaNkulunkulu Ekhohlisiwe'